Weerar culus oo aan horey lo arag oo lagu qaaday Qoys degan Muqdisho iyo Dadka ka agdhow oo aad oga naxay. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Weerar culus oo aan horey lo arag oo lagu qaaday Qoys degan...
Weerar culus oo aan horey lo arag oo lagu qaaday Qoys degan Muqdisho iyo Dadka ka agdhow oo aad oga naxay.
Muqdisho (Caasimadatimes)-Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay qoys ku dhaqan magaalada lagu weeraray hoygooda, iyadoona laga qaatay agabyo kala duwan.
Qoyskan oo degan xaafadda Caymiska ee Degmada Yaaqshiid ayaa waxaa gurigooda ku weeraray nin ku labisnaa dareyska Ciidamada Booliska Somaliya, kuna hubeysnaa qori AK47, kaasoo dadkii guriga ku sugnaa si saf mareen ah uga qaatay agabyo ay ka mid yihiin teleefanada gacanta.
Ninkan ayaa dhaawacay hooyadii qoyska iyo laba wiil oo kale. Ciidamada Dowladda oo guriga meel aan ka fogayn fariisin ku leh ayaan wax gurmad ahi u fidin qoyskaasi.
Aabaha qoyska oo lagu magacaabo Cabdi Aadan Jimcaale ayaa sheegay in ninkaasi uu guriga ka qaatay teleefano iyo agabyo kale oo qoyskiisu uu lahaa, isla-markaana uu dhaawacay xaaskiisii iyo laba wiil oo adeer uu u yahay.
“Magaceyga waa Cabdi Aadan Jimcaale, waxaan jooggaa xaafadda Caymiska. Nin hubeysan ayaa gurigeyga weeraray oo qori AK47 wata, kuna labisan dareyska dowladda. Ciidamo dowladda ah ayaa na ag degan, xaaskeygii waala dhaawacay, laba wiil aan adeer u ahayna waala dhaawacay. Wax alaala iyo wixii mobile iyo agab ay haysteena wuu ka qaatay.” Ayuu yiri Cabdi Aadan Jimcaale.
Cabdi Aadan Jimcaale oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ee Magaalada Muqdisho ayaa Ciidamada Dowladda ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday hoygiisa.
“Waa Ciidamada Dowladda waxa falkaan sameeyay, ciidan kale ama noocaan ah agagaarkeyna ma jooggaan.” Ayuu yiri Cali Aadan Jimcaale.
Aabahan ayaa ku waramaya inay u taggeen Ciidamada Dowladda ee fadhigoodu yahay xaafadda Caymiska, intii ay wax u qaban lahaayeena ay iyagii ku caroodeen.
“Waxaan u tagnay ciidamada agagaarkeyna degan, dad baa la’iga soo laayay baan ku iri, inta ay nagu xanaaqeen ayay yiraahdeen Saldhiga Degmada Yaaqshiid ka dacwooda.” Ayuu yiri aabaha qoyska.
Cabdi Aadan ayaa xusay inay yihiin dad rayid oo aan hubeysnayn, isla-markaana aanay haysan dowlad ay u dacwoodaan, isagoo intaa ku daray in lagu soo weeraray hubkii iyo dareyskii dowladda.
“Haddee dowlad aan u dacwoono maheyno. Dad masaakiina oo shacaba aan hubeysnayn ayaanu nahay. Dareyskii iyo hubkii dowladda ayaa na lagu soo weeraray.” Ayuu yiri Cabdi Aadan.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilliyada habeenkii ku badan dhaca loo gaysto shacabka ku nool magaalada, waase markii ugu horeysay oo la soo wariyo inta qoys lagu weeraray hoygooda, la dhaco, lana dhibaateeyo, mudadii ay jirtay dowladda haataan dhisan.
Wariye-yaasha Magaalada Muqdisho ayaa soo sheegaya in inta badan dhaca shacabka loogu gaysto Magaalada Muqdisho, ay gaystaan rag ku hubeysan hubka fud fudud, qaylo dhaanta shacabkana ay tahay mid isa soo tareysa.
Previous articleDowladda Soomaaliya oosi adag u beenisay Warkii Safiirka Mareykanka ee Kenya
Next articleDAAWO+XOG: Maxaa loo joojiyey dhismihii Wadada Ceel-Daahir & Ceerigaabo, Deni-se ma laga sugayay Joojinteeda?
Haweeney Qosolkeeda badan awgiis Afku iskugu qabsami waayay !! (Daawo Sawirro)
Isbaheysiga sacuudiga oo Duqaymo waweyn kabilabey Caden